Taageereyaasha Liverpool Oo Laga Iibiyey Tigidhada Finalka Champions League Oo Been Abuur Ah - Laacib
HomeWararka Champions LeagueTaageereyaasha Liverpool Oo Laga Iibiyey Tigidhada Finalka Champions League Oo Been Abuur Ah
Taageereyaasha Liverpool Oo Laga Iibiyey Tigidhada Finalka Champions League Oo Been Abuur Ah
Booliska gobolka Merseyside ayaa uga digay taageereyaasha Liverpool inay qaab online ah ku iibsadaan tigidhada finalka Champions League, kaddib markii lagu dhacay taageereyaal badan oo tigidho been abuur ah laga iibiyey.
Finalka Champions League oo Sabtida ay wada ciyaari doonaan Real Madrid iyo Liverpool, laguna qaban doono garoonka Stade de France ee magaalada Paris ayaa waxay taageereyaasha labada kooxood waqti horeba iibsadeen tigidhadii kulankaas ee loo qorsheeyey in labada kooxood la kala siiyo, halka UEFA ay saami kale u qaybisay adduunyada.
Jamaahiirta Liverpool ayaa lagu khiyaameeyey oo lacago badan lagaga dhacay tigidho been abuur ah oo loogu sheegay inay yihiin kuwo suuq madow lagu iibinayo oo dadkii markii hore ka iibsaday UEFA ay dib usii iibinayaan, iyadoo qiimahana loogu sheegay min £50 Gini halkii tigidh.
Taageereyaasha Liverpool ayaa markiiba ku daatay oo bilaabay inay si online ah ku iibsadaan, hase yeeshee war-saxaafadeed ay Salaasadii maanta soo saartay Liverpool ayay ku sheegtay in dhamaan tigidhadaasi ay been abuur yihiin oo lagu dhacay taageereyaasheeda, waxaana baadhitaan bilaabay booliska.
War-saxaafadeedka Liverpool ayaa loogaga digay jamaahiirteeda inay dib usii iibiyaan tigidhadooda, haddii lagu arko qof sidaa samaynayana laga mamnuuci doono in uu waligii soo galo garoonka kooxdaas.
Garoonka Stade de France oo qaada 81,000 qof ayay UEFA labada kooxood u qoondaysay tirooyin is le’eg, waxaana Liverpool la siiyey 19,618 tigidh, halka Real Madrid na ay intaas in le’eg qaadatay.